အိုင်တီခေတ်နည်းပညာနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေး - ဝီကီပီးဒီးယား
ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနေသောနိုင်ငံများတွင် အိုင်တီနှင့်ပတ်သက်၍ ဘာလုပ် ဘာကိုင် ရမှန်း မသိဖြစ်နေချိန်တွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့်နိုင်ငံများ၏ အိုင်တီဈေးကွက်က ပျက်လုလုဖြစ်နေသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်များက အိုင်တီခေတ်တွင် ပညာရှင်တွေ ပျောက်သွားမည်လောဟု စိုးရိမ်သောကတွေပွားနေကြသည်။ အမှန်မှာ နည်းပညာရှင်တွေ အိုင်တီခေတ်တွင် အမြဲလိုအပ်နေ မည်သာဖြစ်သည်။
ဥပမာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့်နိုင်ငံများတွင် Google နှင့် Apple လိုကုမ္ပဏီ ကြီးများက လျှမ်းလျှမ်းတောက်နေသည်။ ထိုကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်းတွေက နိုင်ငံအနှံ့တွင်ရှိနိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီတွေပြိုင်ဆိုင်သည့်ကြားတွင် ပညာ ရှင်တွေကလည်း မျက်နှာပွင့်ကြရသည်မှာ ထုံးစံလိုဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ဘက်ကသာ တတ်ကျွမ်းအပ်သည်များကို အပြည့်အဝပြနိုင်ပါက ထင်ပေါ်လျှင် စင်တော်က ကောက်မည် သာဖြစ်သည်။ တကယ်တော်ပြီး တကယ်တတ်သည့်ပညာရှင်များသည် အလွန်မျက်နှာပွင့်ကြသည်။ လစာ၊ အခွင့်အရေး၊ အပိုဆုကြေးတွေအမျိုးမျိုး အပြိုင် မက်လုံးပေးပြီး ခေါ်နေကြသည်။ ကမ္ဘာကျော်ကုမ္ပဏီကြီးများ၏ လုပ်ကွက်နှင့် ပုံစံတွေကပြောင်းလဲသွားသည်။ ဥပမာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ကုမ္ပဏီကြီးတွေက အမေရိကန်တွင်ရုံးကြီးတွေ အခြေစိုက်ပြထားပြီး အိုင်တီနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်း များကို နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် သွားအပ်ကြသည်။ တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယလိုနိုင်ငံများတွင် လူ့စွမ်းအားရင်းမြစ်တွေကပေါကြွယ်လှသဖြင့် အနောက်နိုင်ငံနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး နိုင်ငံကြီးတွေအတွက် မျက်စိကျစရာဖြစ်လာသည်။ အလားတူ အာရှတွင်လည်း ဗီယက်နမ်၊ လာအို၊ ကမ္ဗောဒီးယားနိုင်ငံများသည် ခိုင်းတာလုပ်၊ ပေးသမျှယူပြီး ပြန်မပြော နားထောင်တတ်လွန်းသဖြင့် အနာဂတ်အိုင်တီလုပ်ကွက်ဖြစ်လာစရာ အကြောင်းရှိသည်ဟု မြင်လာကြသည်။ သို့ဖြစ်ရာ အိုင်တီသည် အိမ်တိုင်ယာရောက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ဖြစ်လာစရာအကြောင်းများစွာရှိပေသည်။
နောင်လာမည့်ဆယ်စုနှစ်တစ်စုအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်သည့် အိုင်တီလုပ်ငန်း များအနက် လုပ်ငန်း ၁၀ ခု ကို အမေရိကန်အစိုးရသည် စစ်တမ်းများကောက်ယူပြီး ထုတ်ပြန်ထားသည်။
၁ 1.	Information System Manager
၂ 2.	Database Adminastrator
၃ 3.	Operating System Developer
၄ 5.	Application Developer
၅ 6.	Computer System Analyst
၆ 7.	Computer System Designer
၇ 8.	Data Processing Specialist
၈ 9.	Web Hosting Technician
၉ 9.	Computer Support Specialist
၁၀ 10.	Desktop Publisher
၁၄ Certificate Level တွင် ရယူထားသင့်သည့် လက်မှတ် များမှာ
၁၅ Diploma Level တွင်ရယူထားသင့်သည့် လက်မှတ်များ မှာ
၁၆ Degree Level တွင် ရယူထားသင့်သည့် လက်မှတ်များမှာ
၁၇ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှအသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ
၁၈ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်မှထုတ်ပေးသည့်နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များ
၂၀ အိုင်တီခေတ်တွင် လေ့လာလိုက်စားသင့်သည့် Programming ဘာသာရပ်များမှာ
၂၁ ပရိုဂရမ်ကိုတတ်ကျွမ်းထားသူများအနေဖြင့် ရရှိနိုင်သည့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများမှာ
၂၂ နိုင်ငံတကာစံ သတ်မှတ်ထားသည့်အိုင်တီ Skillများ
1.	Information System Manager[ပြင်ဆင်ရန်]
ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် အလုပ်အကိုင်နှင့် လုပ်ငန်းပုံစံများကို တသမတ်တည်းထား၍ မဖြစ်နိုင်တော့ပေ။ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားဆက်ဆံရမှုများနည်းလာပြီး အလုပ်သမားအချင်းချင်း ပြန်လည်အုပ်ချုပ်ဆက်ဆံရမှုများသာ ခေတ်စားလာသည်။ IS မန်နေဂျာဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီ၏ အဓိကကျသည့် နည်းပညာဗျူဟာများကို ချမှတ်ပေးရသူတွေဖြစ်လာသည်။ ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို ကျွမ်းကျင်စွာ နားလည်သဘော ပေါက်ထားရသည်။ လုပ်ငန်းသဘောကိုနောကျေအောင် သိသူတွေဖြစ်ဖို့လိုသည်။ ထို့ပြင် ကုမ္ပဏီတွင်အသုံးပြုနေသည့် Server ? bandwidth ကွန်ပျူတာတွေအကြောင်း ကိုလည်း သိထားရသည်။ သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာကို ကိုယ့်လုပ်ငန်း ခွင်အတွက် မည်သို့အကျိုးရှိအောင် အသုံးချရမည်ကို တတ်ကျွမ်းလေ့လာထားဖူး သည့် အတွေ့အကြုံပညာတို့နှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ဖြေရှင်းပေးနိုင်သူ ဖြစ်ရန် လည်းလိုသည်။
သူတို့နိုင်ငံတွင် IS မန်နေဂျာလိုနေရာမျိုးအတွက် နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်ပြီး သာမန်ထက်တတ်ကျွမ်းသည့် ဘွဲ့ဒီဂရီပိုင်ဆိုင်ထားသူများကိုသာ ရွေးချယ်ခန့် အပ်လေ့ရှိသည်။ ကိုယ်တိုင်က လက်ရှိအတွေ့အကြုံလည်းရှိမည်၊ အလုပ်ရှင် လိုချင်သည့် ဘွဲ့လည်းပိုင်ဆိုင်ထားမည်ဆိုလျှင် အခွင့်အလမ်းကောင်းသည့် ထိုရာထူး မျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ပါလိမ့်မည်။ တာဝန်ကြီးပြီး ခန့်အပ်ရန်ခက်ခဲသည့်ထိုရာထူးမျိုးကို ရယူနိုင်သည့် ပညာစွမ်းမျိုးကိုယ့်တွင်ရှိမည်ဆိုလျှင် ခံစားရ ဖွယ်ရှိသည့် ငွေကြေး ပမာဏမှာ တစ်နှစ် ဒေါ်လာ ၉၂၀၀၀ မှသည် တစ်သိန်းအထိဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
2.	Database Adminastrator[ပြင်ဆင်ရန်]
Database Adminastrator ဆိုသည်မှာ အလုပ် သမားများနှင့် ဖောက်သည်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်များကို အပြန်အလှန်အသုံးပြုနိုင်ရေးနှင့် လုံခြုံစိတ်ချရရေး တို့ကို အာမခံချက်ပေးရသူများဖြစ်သည်။ Administrator တစ်ယောက်သည် ကွန်ပျူတာသင်တန်းဆင်းပြီး ကျွမ်းကျင်ပါသည်ဟုပြောရုံနှင့် လုံလောက်မည် မဟုတ်ပေ။ လတ်တလောဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်ပြဿနာများကို ချက်ချင်း လက်ငင်း ဖြေရှင်းပေးနိုင်သူများကိုသာ ထိုရာထူးအတွက် သတ်မှတ်ခြင်းခံရနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာ ပရိုဂရမ်များသည် အခြေခံ database ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်တည်ဆောက်ထားတတ်သည်ဖြစ်ရာ administrator တစ်ယောက်အနေဖြင့် စာတွေ့လက်တွေ့ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာ ရပ်များပေါ်တွင် ခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်စွမ်းရှိပြီး ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိသူများဖြစ်ရလိမ့်မည်။ အခြေခံဘွဲ့တစ်ခုခုနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွက် အသိအမှတ်ပြုထားသည့် ကျွမ်းကျင် လက်မှတ်တစ်ခုခုလိုပါသည်။ တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာ ၈၅၀၀၀ ကျော်ကျော်ရနိုင်သည်။
3.	Operating System Developer[ပြင်ဆင်ရန်]
OS Developer များကို အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းရှိ ကုမ္ပဏီကြီးများတွင်သာ ခန့်အပ်လေ့ရှိကြသဖြင့် ရှားရှားပါးပါးရာထူးမျိုးဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ Operating System ဆိုသည်မှာ ကွန်ပျူတာများ၏အသက်လိုဖြစ်နေသဖြင့် OS ကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာသိထားသူများဖြစ်ရန်လိုသည်။ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း၊ ကား၊ ရေခဲ သေတ္တာနှင့် အခြားအိုင်တီဆိုင်ရာ ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံအလုပ်ရုံကြီးများ တွင်လည်း ယခုအခါ OS Developer များကိုခန့်အပ်လာကြပြီဖြစ်သည်။ နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သည့် ဘွဲ့တစ်ခုခုရထားရန်လိုပါသည်။ ထို့ပြင် ဆော့ဖ်ဝဲ ပလက်ဖောင်းများစွာကို ကျွမ်းကျင်စွာ လေ့လာထားသူများ ဖြစ်ရန်လည်း လိုသည်။
အွန်လိုင်းပေါ်တွင် OS နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်စေရန် လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးနေသည့် ပရိုဂရမ်များ ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင် သည့်အပြင် စာမေးပွဲများဖြေဆိုပြီး ကျွမ်းကျင်လက်မှတ်များလည်းရယူ နိုင်ပါသည်။ OS Developer များသည် တစ်နှစ် ဒေါ်လာ ၈၀၀၀၀ ကျော်ရတတ်သည်။ မိမိတတ်ကျွမ်းမှုကို အစွမ်းပြဖြေရှင်းနိုင်မှုများအပေါ်မူတည်ပြီး လစာ သတ်မှတ် ခံရဖွယ်ရှိသည်။ စက်ရုံအလုပ်ရုံများတွင်လုပ်ရသည်မှာ တစ်ခါတစ်ရံ စက်ကိရိယာ များကို ကိုင်တွယ်ရသည်က ကွန်ပျူတာထက်ခက် နေတတ်သည်ကို သတိပြုရ ပေလိမ့်မည်။
5.	Application Developer[ပြင်ဆင်ရန်]
ကွန်ပျူတာဘွဲ့ရများထဲတွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကောင်းဆုံးဘာသာရပ်တွင် application များကိုတည်ဆောက် တတ်ခြင်းလည်းပါဝင်နေသည်။ AD များသည် ကုမ္ပဏီကြီးများတွင် အလုပ်ရတတ်သည်။ သူတို့အလုပ်များမှာ ဆော့ဖ်ဝဲ Tool အတော်များများကို အသုံးချတတ်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြင့် Office အုပ်စုဝင် ပရိုဂရမ်များအပြင် အခြားလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် application များကိုလည်း သိကျွမ်းထားရန်လိုသည်။ AD များအနေဖြင့် နည်းပညာဆိုရာဘွဲ့တစ်ခုခုကို ရရှိထားရမည့်အပြင် ကုမ္ပဏီမှလိုအပ်သည့် application များကိုလည်း ကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်တွယ်သုံးပြတတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ ဆေးသုတေသနလုပ်ငန်း အတွက်ဆိုလျှင် ဆေးသုတေသနဆိုင်ရာ tool များကို သုံးစွဲပြနိုင်သူဖြစ်ရန်လိုသည်။
AD များသည် တစ်နှစ် ဒေါ်လာ ၇၀၀၀၀ ကျော် ရတတ်သည်။ Application များကို ကျွမ်းကျင်ရန်အတွက် အထွေအထူးသင်တန်းကြီးများတက်ပြီး လိုက်စားရန် မလိုပေ။ ယခုအခါ အွန်လိုင်းထဲတွင် သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ် အလိုက် application များကို အခမဲ့လေ့လာနိုင်သည့်အပြင် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် စပွန်ဆာပေးသည့် ကုမ္ပဏီများတွင် စာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုပြီး အသိအမှတ်ပြုအောင်လက်မှတ် များကို အလွယ်တကူရယူနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ AD များအနေဖြင့် သာမန်စာစီစာရိုက်နှင့် စာရင်းဇယားလုပ်ပြတတ်ရုံမျှသာခိုင်းသည်ဆိုလျှင် လစာနည်းတတ်ပြီး ပရောဂျက် ကြီးများတွင် အစွမ်းပြနိုင်မှ လစာကောင်းတတ်သည်။
6.	Computer System Analyst[ပြင်ဆင်ရန်]
IS မန်နေဂျာများနှင့် နီးကပ်စွာလုပ်ကိုင်ရမည့်သူများဖြစ်သည်။ Analyst ဟု ဆိုထားသဖြင့် ကွန်ပျူတာနှင့်ပတ်သက်သည့် စိန်ခေါ်မှုမှန်သမျှကို နှိုက်နှိုက် ချွတ်ချွတ်ဖြေရှင်း ပြတတ်သူဖြစ်ရန်လိုသည်။ ကုမ္ပဏီအတွင်းရှိ အလုပ်သမား များသုံးစွဲသည့်ကွန်ပျူတာများအတွက် ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲ ပြဿနာများကို မိမိ ကျွမ်းကျင်မှုကိုပေါင်းစပ်ပြီး ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်လည်းလိုသည်။ တစ်နှစ် ဒေါ်လာ ၆၆၀၀၀ ကျော်ရနိုင် သည်။
ကုမ္ပဏီအများစုသည် ဒီဇိုင်နာနှင့် ပရိုဂရမ်မာများကို Analyst များနှင့် ခွဲခြား ထားလေ့ရှိကြသည်။ Analyst ဆိုသည်မှာ ပရိုဂရမ်ရေးရန်မဟုတ် solution များရအောင် ဝေဖန်သုံးသပ်ပြနိုင်သူသာဖြစ်ရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားလေ့ရှိကြသည်။ သို့ဖြစ်ရာ အွန်လိုင်းကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့တစ်ခုခု ရရှိထားပြီး အခြားသုတေသန လုပ်ငန်းများကိုစိတ်ဝင်စားသူ ဖြစ်ရန်လည်းလိုသည်။ ထို့ပြင်ပရိုဂရမ်ကို ကျွမ်းကျင် ပိုင်နိုင်စွာတတ်မြောက်ထားသူလည်းဖြစ်သင့်သည်။
7.	Computer System Designer[ပြင်ဆင်ရန်]
CSD များသည် တစ်နှစ် ဒေါ်လာ ၆၅၀၀၀ နီးပါး ရတတ်သည်။ CSD များ၏တာဝန်မှာ ကွန်ပျူတာ system တစ်ခုခု၏ အကျိုးသက်ရာက်မှု အပေါ်တွင် သာ လေ့လာအကဲဖြတ်ရတတ်ခြင်း၊ အခြားကြီးများသည့် ဆော့ဖ်ဝဲပရောဂျက်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရတတ်သည်။ နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သည့် ဘွဲ့တစ်ခုခုရှိထားရန် လိုပါသည်။ ကုမ္ပဏီများတွင် CSD ကိုဘွဲ့တစ်ခုတည်းသာမက ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ ရေးကိုပါ စစ်ဆေးပြီးမှ ခန့်တပ်ကြသည်။
ဤရာထူးအတွက် အဖွဲ့လိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်၊ ဆော့ဖ်ဝဲ များကို အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သူများကို ဦးစားပေးခန့်လေ့ရှိသည်။ CSD များသည် ကိုယ်ပိုင်တီထွင်နိုင်စွမ်းနှင့် ဖန်တီးဉာဏ်စွမ်းများရှိ ရန်လိုသည်။ ပြဿနာတစ်ခုခု ပေါ်လာလျှင် ဦးဆောင်ဖြေရှင်းနိုင်သည့်စွမ်းရည်မျိုးလည်းရှိရပေလိမ့်မည်။ အွန်လိုင်း တွင် CSD များအတွက် အမြဲ update ဖြစ်နေစေမည့် ပရိုဂရမ်များကို မပြတ်လေ့လာပြီး မွမ်းမံနေသင့်သည်။
8.	Data Processing Specialist[ပြင်ဆင်ရန်]
ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် မန်နေဂျာနှင့် administrator များက ကုမ္ပဏီ data များ အတွက်အထောက်အကူပြုနေချိန်တွင် အထူးကျွမ်းကျင်သူများ အမည်ခံထားရသည့် အဖွဲ့က ထို data များကို တိကျမှန်ကန်မှုရှိစေရန် ပြုစုစီမံပေးကြရသည်။ ဘဏ်နှင့် အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီကြီးများတွင် DPS များကိုခန့်ထားလေ့ရှိကြသည်။ နည်းပညာ ဆိုင်ရာဘွဲ့တစ်ခုခု ရှိထားရန်လိုသည်။ Data များကို backup လုပ်ခြင်းနှင့် transfer လုပ်ခြင်းများကို ကျွမ်းကျင်ရန်လိုသည်။
ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ဆေးလောကတွင်အလုပ်လုပ်လိုသည်ဆိုပါက အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် အိုင်တီဒီဂရီတစ်ခုခုကိုရယူနိုင်သည်။ အွန်လိုင်းတွင် database နှင့် storage device များကိုလေ့လာနိုင်ပါသေးသည်။ ကိုယ့်လုပ်ဆောင်ရ မည့်နယ်ပယ်ကို ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်မည်ဆိုလျှင် တစ်နှစ် ဒေါ်လာ ၆၄၀၀၀ ကျော်ရရှိနိုင်သည်။
9.	Web Hosting Technician[ပြင်ဆင်ရန်]
လွန်ခဲ့သည့် ၁၀ နှစ်ကျော်ခန့်ဆိုလျှင် Web Hosting ပညာရှင်ဆိုသည့်ရာထူးကို မည်သူမျှစိတ်ကူးကြမည် မဟုတ်ပေ။ ယခုခေတ်တွင် Web သည် အိမ်တိုင်း၊ နေရာ တိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် လျှပ်စစ်နှင့် ရေပေးဝေရေးစနစ်ကဲ့သို့ ဖြစ်လာ ပြီဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများနှင့် သီးခြား လုပ်ငန်းရပ်များတွင် အွန်လိုင်းကို promotion လုပ်ရန် အထူးလိုအပ်လာပြီဖြစ်သည်။ မိမိတို့ site များကို စာများ၊ ပုံများ၊ data များထည့်က တိုးတက်အောင်လုပ်သည့်ဓလေ့များခေတ်စားလာသည်။ ကွန်ပျူတာ ဖြင့် သင်တန်းပေးခြင်း၊ မိမိတို့ဖောက်သည်များကို ကျေနပ်အောင် ဝန်ဆောင်မှု ပေးခြင်းတို့အား Web မှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်လာကြပြီဖြစ်သဖြင့် hosting လုပ်ရန် ပညာရှင်များစွာလိုအပ်သည့်ခေတ်ဖြစ်လာသည်။
WHT အလုပ်အတွက် ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲနှစ်မျိုးစလုံး ကျွမ်းကျင်ရန်လိုသည်။ ထို့ပြင် အင်တာနက် Web ကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာဖြင့်ကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး Security system များကိုလည်း နားလည်ရမည်ဖြစ်သည်။ စီနီယာပညာရှင်တစ်ယောက်သည် တစ်နှစ် ဒေါ်လာ ၆၄၀၀၀ ခန့်ရနိုင်သည်။
9.	Computer Support Specialist[ပြင်ဆင်ရန်]
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်သည်တစ်ချိန်က “စားပွဲတိုင်းပေါ်မှာ ကွန်ပျူတာရှိရမည်” ဟု ပြောခဲ့ဖူးသည်။ ယခုမိုက်ခရိုဆော့ဖ်၏စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်များသည် လက်တွေ့ ဖြစ်လာသည်။ ကွန်ပျူတာအိမ်တိုင်းလိုလိုတွင် ရှိလာသည်သာမက ကွန်ပျူတာ ပျက်သည့်အတွက်ပြင်ဆင်နိုင်မည့် နည်းပညာပိုင်းအကြံပေးသူတွေလည်း လိုအပ် လာသည်။ ကွန်ပျူတာပြင်နိုင်၊ မေးလာသမျှကိုအကြံပေးနိုင်ရန်အတွက် စာတွေ့ ချည်းသက်သက်မဖြစ်နိုင်ပေ။ စိတ်ပါဝင်စားမှု၊ လေ့လာလိုက်စားမှု၊ လက်တွေ့ များများလုပ်ဆောင်နိုင်မှုများမှ ပညာရှင်ဆိုသည့် ဘွဲ့ထူးကိုရလာနိုင်ပေလိမ့်မည်။ CSS ရာထူးသည် အမြဲစိန် ခေါ်ခြင်းခံနေရသည့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ရာထူး တစ်ခုဖြစ်သည်။
တစ်ချိန်က အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သူတွေ နိုင်ငံရပ်ခြား ထွက်ကာ အလုပ်ရှာကြလိမ့်မည်၊ နောက်ပိုင်းတွင် ကွန်ပျူတာပြင်သည့်သူပင် ရှားသွားလိမ့်မည် ဟုထင်ခဲ့ကြဖူးသည်။ ယခုအချိန်အထိ ကွန်ပျူတာအတိုင်ပင်ခံ specialist များ လိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ သို့ဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ကွန်ပျူတာပြဿနာ အဖြေရှာကြသည့်လုပ်ငန်းသည် ထွန်းကားလာရသည်။ ဆေးပညာကျွမ်းကျင်သည့် specialist တစ်ယောက်ကဲ့သို့ပင် ကွန်ပျူတာ specialist များမှာလည်း တစ်ရေးနိုးဖြေရှင်းပေးရမည့် လျှပ်တစ်ပြက်ပြဿနာများစွာရှိနိုင်သဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှု ကအရေးကြီးသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာဘွဲ့တစ်ခုခုအပြင် ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ specialist အဖြစ်စံထားသည့် လက်မှတ်တစ်ခုခုလည်းလိုပါသည်။ အရည် အချင်းပြည့်ပညာရှင်တစ်ယောက်သည် တစ်နှစ် ဒေါ်လာ ၄၀၀၀၀ ခန့်ရနိုင်သည်။
10.	Desktop Publisher[ပြင်ဆင်ရန်]
ထိပ်တန်းရောက်နေသည့် နည်းပညာဆိုရာလုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် ဘွဲ့မလိုပေ။ ကုမ္ပဏီကြီးများသည်သာ အစီရင်ခံစာများ၊ ညွှန်ကြားချက်များကို ဝန်ထမ်းများမှ တစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်ခိုင်းလေ့ရှိကြသည်။ သို့ဖြစ်ရာ စာစီစာရိုက်ဝန်ထမ်းများသည် ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် ရုံးအဖွဲ့များတွင် မဖြစ်မနေ လိုအပ်လာသည်။ စာစီစာရိုက် သမားတစ်ယောက်၏ ကျွမ်းကျင်မှုကိုလည်း လျော့တွက်၍မရပေ။ သူကျွမ်းကျင် သည့်ပညာဖြင့် စာတစ်စောင် သို့မဟုတ် အစီရင်ခံစာတစ်ခု သို့မဟုတ် အစည်း အဝေးတွင်တင်ပြရ PowerPoint တို့ကို နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းပါတပ်ကျွမ်းထားရန်လိုပြီး အတွေ့အကြုံ အနည်း ဆုံး ၂ နှစ်ခန့်ရှိရန်လိုသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင် မှုရှိရန်သာလိုအပ်ပြီး တစ်နှစ် ဒေါ်လာ ၃၂၀၀၀ ခန့်ရတတ်သည်။
၂၁ ရာစုကို အိုင်တီခေတ်ဟုဆိုကြသည်။ အိုင်တီခေတ်တွင် အိုင်တီနှင့် ဆက်စပ်နေသည့်လက်မှတ်များ အရေးပါလာရသည်။ ကုမ္ပဏီတွေကလည်း အိုင်တီ လက်မှတ်တစ်ခုခုကို ရရှိထားသူများကိုသာ မျက်စိကျလာသည်။ အိုင်တီလောက သိထားစရာ တတ်ထားစရာတွေက များပြားလှသည်။ လူတိုင်း နည်းပညာတိုင်းနှင့် System တိုင်းကိုမသိနိုင်ပေ။ အိုင်တီဆိုသည်မှာ လူနှင့် ဆက်စပ်ပြီး ဖြစ်ပေါ် လာရသည်။ လူသားနှင့်မကင်းကွာနိုင်သေးသမျှ လူသားတို့အခန်းကဏ္ဍသည် အိုင်တီတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေရဦးမည်သာဖြစ်သည်။
သမိုင်းတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဆိုသည်မှာ ပေါ်ပေါက်လာသည့် နည်းပညာ ကို အမှီပြုပြီး တိုးတက်ထွန်းကားလာရသည်သာဖြစ်သည်။ အလုပ်တိုင်းတွင် ကျွမ်းကျင်မှုသည်မဖြစ်မနေအရေးကြီးလာသည်။ နည်းပညာတိုးတက် လာသည်နှင့် အညီ နည်းပညာကိုကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးချတတ်သူများလည်းလိုလာသည်။ အိုင်တီခေတ်တွင် ကွန်ပျူတာသည် လူ့ဘောင်ဘဝကို ပြဋ္ဌာန်းသည့် ပစ္စည်း တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အိမ်၊ ကျောင်း၊ ရုံးများအပြင် ကစားကွင်းများတွင်ပါ ကွန်ပျူတာတွေရောက်လာသည်။ ကွန်ပျူတာသည် နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် မရှိမဖြစ် ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အိုင်တီခေတ်ထုတ်လုပ်မှုမှန်သမျှတွင် ကွန်ပျူတာသည် မပါမဖြစ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ထိုသို့လုပ်ငန်းခွင်နှင့် နေရာတိုင်းတွင် မရှိမဖြစ်ကွန်ပျူတာကို လူတို့ထိန်းသိမ်းချုပ်ကိုင် ခိုင်းစေနိုင်စွမ်းရှိရန်လိုလာသည်။ ဤသို့ဖြင့် ကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်၊ ကွန်ပျူတာနှင့်ပတ်သက်သည့်နယ်ပယ်များတွင် ကျွမ်းကျင်၊ ကွန်ပျူတာစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေရန် ကျွမ်းကျင်၊ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် စနစ်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ကျွမ်းကျင်တွေ များစွာလိုလာရသည်။ ထိုသို့ ကျွမ်းကျင် သူများကို ဘာနှင့်သတ်မှတ်ရမည်နည်း။ ကျွမ်းကျင်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြု ထားသည့် လက်မှတ် (certification) များဖြင့်သာ သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အိုင်တီခေတ်တွင် အိုင်တီလက်မှတ်သည် “စံ” တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အိုင်တီခေတ် တွင် အိုင်တီလက်မှတ်တစ်ခုခုကို ကိုင်ဆောင်ထားသူသာလျှင် ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုခုက ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ရမည့် သူဖြစ်လာပေလိမ့်မည်။
ကွန်ပျူတာလက်မှတ်ဆိုသည်မှာ အိုင်တီနယ်ပယ်တစ်ခုတွင် အခြေခံသိကျွမ်းမှု မည်မျှရှိကြောင်း သတ်မှတ်ပေးသည့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းတွင် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တစ်ခုခုကို သတ်မှတ် ထားသည့် စာမေးပွဲတစ်ခုခုဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးမှသာ ရရှိနိုင်ပေသည်။ အိုင်တီ လက်မှတ်ဆိုသည်မှာ အိုင်တီနှင့်ပတ်သက်သည့်နယ်ပယ်တစ်ခုခုတွင် စာတွေ့၊ လက်တွေ့တစ်ခုခုလေ့လာမှတ်သားပြီးမှ ရရှိနိုင်သည့် လက်မှတ်မျိုးလည်းဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသည့် အိုင်တီလက်မှတ်တစ်ခုခုကို ရရှိပြီးသူအား အိုင်တီလောကတွင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖြစ် သတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။
အိုင်တီခေတ်တွင် အလိုအပ်ဆုံးနှင့် အရေးအပါဆုံးလုပ်ငန်းများသည် လက်မှတ် တစ်ခုခုသတ်မှတ်ခံရတတ်ပါသည်။ အိုင်တီခေတ်လက်မှတ်များကို အိုင်တီနှင့် ပတ်သက်သည့် အဖွဲ့အစည်းကြီးများ၊ ကုမ္ပဏီကြီးများက ကမကထပြုကာ မတည် ပြဋ္ဌာန်းပေးလေ့ရှိသည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းကြီးများကပင် စာမေးပွဲများ ကြီးမှူးစစ်ဆေး ပေးခြင်း နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုရန် ထုတ်ပြန်ပေးခြင်းတို့လည်း ပြုလုပ်ပေး လေ့ရှိသည်။
ကွန်ပျူတာလက်မှတ်များကို sponsor ပေးသူများထဲတွင် ဟာ့ဒ်ဝဲထုတ်လုပ်သူများ သာမက ဆော့ဖ်ဝဲထုတ်လုပ် သူများလည်းပါဝင်သည်။ လွတ်လပ်သည့်သင်တန်းဌာန ကြီးများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာသင်ဌာနကြီးများ လည်းပါတတ်သည်။
လူတစ်ယောက်၏အရည်အသွေးကို သူလေ့လာကျွမ်းကျင် တတ်မြောက် သင်ယူထား သည့် အရည်အချင်းများနှင့်ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အိုင်တီခေတ်တွင် မဖြစ်မနေတတ်မြောက်ကျွမ်းကျင်ရမည့် အရည်အချင်းများကို သတ်မှတ်ပြီးသား ဖြစ်သည်။ အိုင်တီနှင့်ဆက်နွှယ်သော အရည်အသွေးများကို Level သုံးမျိုးဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ် နိုင်ပါသည်။
o	Level 1	- Certificate Level
o	Lelel 2	- Diploma Level
o	Level 3	- Degree Level
Certificate Level တွင် ရယူထားသင့်သည့် လက်မှတ် များမှာ[ပြင်ဆင်ရန်]
-	Certificate in Software Engineering
-	Certificate in Network Engineering
-	Certificate in Hardware Engineering
-	Certificate in Web Developer
-	Certificate in Graphic Designer
-	Certificate in Database Administration
Diploma Level တွင်ရယူထားသင့်သည့် လက်မှတ်များ မှာ[ပြင်ဆင်ရန်]
-	IDCS (UK)
-	DCS (UK)
-	IDEC (UK)
-	IADCS (UK)
-	ADCS (UK)
-	Diploma in Information Technology
-	Diploma in Software Engineering
-	Diploma in Network Engineering
-	Diploma in Computer Arts (Multimedia)
Degree Level တွင် ရယူထားသင့်သည့် လက်မှတ်များမှာ[ပြင်ဆင်ရန်]
-	B.Sc (Com Science)
-	BCIS (UK)
-	B.E (IT)
-	B.Tech (IT)
-	ITPEC (Cross Certification with Japan)
-	MCPA-FE Certification
-	MCPA-SD Certification
-	MCPA-NE Certification
အထက်ပါလက်မှတ်များကို မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူး ကျင်းပသည့် အောက်ပါစာမေးပွဲများ ကိုအောင်မြင်လျှင်ရရှိနိုင်သည်။
-	MCPA Fundamental Engineer Exam
-	MCPA Software Development Exam
-	MCPA Network Engineer Exam
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များသည် အိုင်တီလုပ်ငန်းကို အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းပြုလိုသူများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် လက်မှတ်များဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာတွင် မျက်နှာပန်းလှသည့်အိုင်တီလက်မှတ်များထဲတွင် မိုက်ခရိုဆော့ဖ်မှ ထုတ်ပေးသည့်လက်မှတ်များပါဝင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီး အလွယ်တကူရရှိနိုင်သော လက်မှတ်များဖြစ်သည်။
-	MCP (Microsoft Certified Professional)
-	MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer)
-	MCSD (Microsoft Certified Solution Developer)
-	MCAD (Microsoft Certified Application Developer)
-	MCSA (Microsoft Certified System Administrator)
-	MCTS (Microsoft Certified Technical Specialist)
-	MCITP (Microsoft Certified IT Professional)
-	MCDBA (Microsoft Certified Database Administrator)
အိုင်တီခေတ်တွင် အရေးပါသည့်အခန်းကဏ္ဍများထဲ၌ ချန်ထားခဲ့၍မရသည့် အတတ်ပညာနှင့် လက်မှတ်များထဲတွင် ပရိုဂရမ်ဘာသာရပ်ပါသည်။ အိုင်တီခေတ် တွင် ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်နွှယ်ပြီး လုပ်ငန်းများစွာရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ထိပ်တန်းမှ နေရာယူထားသည့် ပညာရပ်တွင် ပရိုဂရမ်ကရှိနေသည်။ ပရိုဂရမ်ဘာသာရပ်သည် ခက်ခဲနက်နဲလှသည်မှန်သော်လည်း စိတ်ဝင်စားစွာလေ့လာလျှင် ကျွမ်းကျင်စွာတတ် မြောက်နိုင်သည့် ဘာသာရပ်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာတွင် ပရိုဂရမ်မာများသည် အိုင်တီ နှင့် ဆက်စပ်သည့်လုပ်ငန်းပေါင်းစုံတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေရပြီး ရာထူး ကောင်း ကောင်းနှင့် လစာကောင်းကောင်းကို ပိုင်ဆိုင်နေကြသူများလည်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပရိုဂရမ်မာတစ်ဦးနှင့်ပရိုဂရမ်ဘာသာရပ်ကို လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးနေသည့်ဆရာတစ်ဦးက ပရိုဂရမ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဤအလုပ်သည် အိမ်ထဲက အိမ်ပြင်မထွက်ဘဲ ငွေရှာနိုင်သည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပရိုတစ်ခု ပေါက်သွားလျှင် ငွေသန်းနှင့်ချီပြီးရနိုင်ကြောင်း၊ လူတိုင်းဒုံးပျံတစ်စင်း တည်ထွင်ရန် မဖြစ်နိုင်သော် လည်း ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုကို လူတိုင်းတီထွင်နိုင်ကြောင်း၊ အနာဂတ်တွင် ကုမ္ပဏီတိုင်း အဖွဲ့အစည်းတိုင်းတွင် ဆော့ဖ်ဝဲကို မဖြစ်မနေ သုံးကြရတော့မည် ဖြစ်သဖြင့် ဆော့ဖ်ဝဲကိုရေးသားနိုင်မည့် ပရိုဂရမ်တို့ကိုလေ့လာလိုက်စားထားခြင်းဖြင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ မရှားနိုင်ပါဟုဝေဖန်ထောက်ပြသွားသည်။ Database ဘာသာရပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရရှိနိုင်သည့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများမှာ -
-	Database Administrator (DBA)
-	Business Intelligence (BI) တို့ဖြစ်သည်။
Database နှင့်ပတ်သက်ပြီး လေ့လာလိုက်စားသင့် သည့် နည်းပညာများမှာ
-	Oracle Server
-	IBM DB2 Server
-	Sybase SQL Server
-	Microsoft SQL Server တို့ဖြစ်သည်။
အိုင်တီခေတ်တွင် လေ့လာလိုက်စားသင့်သည့် Programming ဘာသာရပ်များမှာ[ပြင်ဆင်ရန်]
Sun Java တို့ဖြစ်သည်။
ပရိုဂရမ်ကိုတတ်ကျွမ်းထားသူများအနေဖြင့် ရရှိနိုင်သည့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများမှာ[ပြင်ဆင်ရန်]
-	Web Application Developer
-	Windows Application Developer
-	Enterprise Application Developer
-	Mobile Application Developer တို့ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာစံ သတ်မှတ်ထားသည့်အိုင်တီ Skillများ[ပြင်ဆင်ရန်]
နိုင်ငံတကာတွင် အိုင်တီနှင့်လုပ်စားတော့မည်၊ အဆင့်မြင့်မြင့်နေရာ လိုချင်သည် ဆိုလျှင် သူတို့သတ်မှတ်ထားကြသော စံအတိုင်း ကျွမ်းကျင်အောင် လုပ်ထား ကြရပေလိမ့်မည်။
အိုင်တီသမားတစ်ယောက် ကျွမ်းကျင်ထားရမည့် Language များမှာ
•	Borland JBuilder,
•	Sun ONE Studio (Forte),
•	Macromedia Dreamweaver MX,
•	Rational Rose,
•	Borland CBuilder,
•	Oracle SQL Plus
အသုံးပြုနိုင်ရမည့် Operating System များ
•	Windows (XP, 2000, NT),
•	IBM OS/2 2.0,
•	HP-UX 9.0,
•	DEC VMS 4.1,
•	Unix (Linux and Sun Solaris)
အိုင်တီသမားတစ်ယောက်အနေဖြင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ Skill နှင့်ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံကို ဤသို့သတ်မှတ်နိုင်သည်။
Language တွင် Java, C, C++, UML များကို လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၅ နှစ်မှ ၈ နှစ်သတ်မှတ်သည်။
Skill Level နှင့်ပတ်သက်ပြီး အိုင်တီသမားတစ်ယောက်ကို ဤသို့ သတ်မှတ်သည်။
Language	Years' Experience	Skill Level
•	Java	6	Expert
•	XML	3	Intermidate
•	C	6	Expert
•	C++	4	Intermidate
•	SQL	4	Intermidate
•	HTML	6	Intermidate
•	UML	2	Novice
အိုင်တီသမားတစ်ယောက်ဘဝကိုခံယူပြီး အိုင်တီဖြင့် အသက်မွေးလိုသူများအနေဖြင့် ကွန်ပျူတာတတ်ရုံလေးမျှဖြင့် လုံလောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ အိုင်တီလောကသည် လွန်စွာကျယ်ဝန်းလှသည်။ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတည်းမှာပင် သိထားသင့်သော အချက်တွေကကုန်နိုင်အံ့မထင်ပါ။ အိုင်တီဖြင့် အသက်မွေးလိုသူများကို အကြံ ပြုရ လျှင် လိုင်းတစ်ခုခုကို သေသေချာချာ ရွေးသင့်သည်ဟု ပြောလိုပါသည်။ ကွန်ပျူတာ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းလိုင်းကိုလိုက်မည်ဆိုလျှင် application များကို ကျွမ်းကျင်စွာသုံးတတ် စေရန် အချိန်ယူလေ့လာရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သတင်းမီဒီယာခေတ်ဖြစ်သဖြင့် Layout ဒီဇိုင်နာများ၊ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာများ လွန်စွာလိုသည့်ခေတ်ဖြစ်နေသည်။ ပြည်တွင်း မှာပင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေပေါသည်။ ဂျာနယ်တိုက်တွေ၊ မဂ္ဂဇင်းတိုက် တွေပေါသဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှုအလိုက် အလုပ်အကိုင်ပေါသည်။ လစာလည်းကောင်းပြီး ဘဝရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်တွင်းတွင်စဉ်းစားသင့်သည့် လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်သည် တီထွင်နိုင်မှုနှင့် ဆန်းသစ်သည့် အတွေးအခေါ် များ၊ စူးစမ်းလေ့လာလိုသည့် စိတ်နှင့် အနုပညာမျက်စိ အမြင်များရှိရန်လိုပါသည်။
ကွန်ပျူတာကိုသုံးတတ်ရုံသာမဟုတ် ဖန်တီးစေခိုင်း တတ်ရန်အတွက်ပါ ကြိုးစားချင် သူများသည် ပရိုဂရမ်ဘာသာရပ်ကို လေ့လာသင့်ပါသည်။ ပရိုဂရမ် ရေးသားခြင်း သည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး ချမ်းသာကြွယ်၀နိုင်သည့်နည်းလမ်း တစ်ခုဟူ၍ ပြောနိုင်ရုံမျှမက အလုပ်အကိုင်မရှားသည့် အတွက် ပရိုဂရမ်မာတစ်ယောက်ဖြစ်ရန် ကြိုးစားသင့်ပါ သည်။
မည်သည့်လုပ်ငန်းမဆို စူးစိုက်လေ့လာမှုရှိပြီး ဇွဲရှိမှသာလျှင် တိုးတက် အောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ သူများပြောတိုင်း လိုက်လုပ်၊ ဟိုဟာ ကောင်းမည်ထင်၍ ပြောင်း၊ သည်ဟာကောင်းမည်ထင်ပြီးလျှောက်ပြောင်းလျှင် ရေသာများပြီး ငါးမတွေ့ ဆိုသလို ဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်။ အိုင်တီလောကတွင် ကြီးသည် ငယ်သည်ဟူ၍မရှိပေ။ စိတ်ပါဝင်စားသလောက် ငယ်သည်ကို ကြီးအောင်လုပ်နိုင်ပြီး ကြီးသည်ကိုလည်း ငယ်အောင်လုပ်နိုင်ခွင့်များရှိသည်သာဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာသည် လူမှုဘဝအတွက် အဆင်တန်ဆာ၊ မရှိမဖြစ်ပစ္စည်း တစ်ခုဖြစ်နေသရွေ့ ကွန်ပျူတာနှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်း၊ ယင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်နေသည့် အိုင်တီလုပ်ငန်းများသည် အခွင့်အလမ်း ကောင်းနေဦးမည်သာဖြစ်သည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အိုင်တီခေတ်နည်းပညာနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေး&oldid=282682" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၅၊ ၀၆:၀၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။